Fahfaahinta Qarax ka dhacay Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Fahfaahinta Qarax ka dhacay Muqdisho
Wuxuu dhacay xili mashquul badan oo wadada ka jiro Salaadii Cishe kadib.
MUQDISHO, Soomaaliya - Qarax ayaa Caawa fiidkii ka dhacay meel u dhaw KM4 magaaladda Muqdisho, kaasoo side booliska uu sheegay aan ka dhalan wax khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah.
Gaari lagu soo xiray walxo qarxa ayaa la dhigay wadada dhinaceeda, oo looga tagay, waxaana ka shakiyay dadka shacabka ah ee ka agdhowaa kuwaasoo ku wargeliyay laamaha amniga kadibna sidaasi lagu fashilayay weerarka.
Wadada waa mid mashquul badan oo ay aad u isticmaalaan madaxda dalka, Saraakiisha amniga iyo siyaasiyiinta, iyadoo horey qaraxyo loogula beegsaday dhowr mas'uul oo ugu dambeeyay taliye Ciidanka Militeriga katirsanaa oo habeeno kahor lagu dhaawacay qarax miino oo ka dhacay nawaaxiha Afisyooni.
Al-Shabaab ayaa qaraxyada miinooyinka iyo kuwa baabuurta ka fulisa Muqdisho si ay u muujiso joogitaankeeda iyo inay wali awoodda inay weeraro Caasimadda ka geysan karto iyadoo aan ka talin, oo laga saarey August 2011.
Fashil amni ayaa ka jira dowladda uu hogaamiyo Farmaajo, taasoo waqtigeedu dhamaaday bishii lasoo dhaafay, iyadoo habacsanaanta jirta ay Kooxda Al-Shabaab ka faa'ideysanayso.